Kolkata, pakati pemaguta akanaka kwazvo muIndia | Absolut Kufamba
Kolkata, pakati pemaguta akanaka kwazvo muIndia
Daniel | | Updated on 11/03/2021 10:42 | India
Calcuta, raimbova guta guru reBritish India, richiri nekumwe kunaka kweyekare, izvo zvinoita kuti rive guta rakasiyana nemamwe maguta makuru munyika. Kunyangwe nanhasi inoramba iri guta rinozvikudza redunhu reWest Bengal uye nemoyo wetsika weIndia.
Chinhu chakanakisa nezvekushanyira Calcutta kune mufambi wekumadokero ndechekuti iwe unowana mune zvese iko chaikoiko kweIndia, asi iwe uchawanawo zvimwe zvakawanda. Uye ndezvekuti muguta rino munogara vanhu vanopfuura mamirioni mashanu kune vakawanda nhoroondo, hunyanzvi, tsika uye kunakidzwa.
Kolkata iguta zvakare remisiyano. Mariri, dzimba dzemadzishe nedzimba dzemhando yepamusoro dzinogarisana nedzimwe nharaunda dzine hurombo pasi rose, uko kune mukurumbira Amai Teresa yakagadzira isinganeti basa rekubatsira kwemakumi emakore.
Asi pamusoro pezvose, Kolkata inzvimbo inonakidza isingasiye munhu asina hanya. Izvi ndizvo kushanya kwakakosha:
1 Dakshineswar Tembere
3 Maidan naVictoria Memorial
5 Kumwe kushanya kwakakosha muCalcutta
Imwe yezvivakwa zvakanakisa uye zvinoyevedza munyika. Iyo Dakshineswar tembere yakatsaurirwa kuna mwarikadzi Kali, inogara izere nevanozvipira uye vashanyi.
Tembere inomira pamahombekombe e hooghly rwizi. Iyo yakavakwa muzana ramakore rechiXNUMX pachirongwa chekupa rubatsiro Rani Rasmoni. Chimiro chayo chinokwezva kune ayo mapfumbamwe makuru eshongwe. Atova mukati mechivanze hombe anovhura apo vakatendeka vanogona kunamatira uye kukwidza minamato yavo kuzvifananidzo zvikuru machena machena emamwari evanamwari vechiHindu senge Shiva, Vishnu uye, chokwadika, Kali.
Pazasi petembere pane iyo ghat, matanho matsvene anodzika kumahombekombe erwizi.
Mukova weTemberi yeDakshineswar ndeye mahara, pamwe izvo zvinotsanangura kuti nei ichigara yakazara nevanhu.
Kune vazhinji, ichi ndicho chiratidzo chikuru cheguta. Kunyangwe iri zita repamutemo riri Rabindra SetuWese munhu muCalcutta anomuziva nezita raakapihwa neChirungu: Howrah bhiriji. Yakavhurwa muna 1943 kupa iro guta mukana kubva kuguta rakavakidzana reHowrah, kwarinotora zita rayo.
Iyo Howrah Bridge muKolkata
Iyi inoshamisa simbi chivakwa inotsigira inorema traffic: dzinenge 150.000 mota uye vanopfuura 90.000 vanofamba netsoka pazuva. Makuriro ayo anotevera: 217 metres pakureba uye 90 metres kukwirira. Husiku inopenyerwa ichipa yakanaka show kuCalcutenses.
Maidan naVictoria Memorial
Iyo paki yakakosha kwazvo muguta, inozivikanwa panguva dzekoloni se Brigade Paradhiso Ground. Iyo esplanade hombe ine miti nehuswa nzvimbo dziri pakati chaipo peCalcutta. Iyo inzvimbo yakanaka yekutiza chipatapata chemigwagwa yeguta, icho chevashanyi chinogona kuve chinotyisa.
Vatambi vekiriketi paMaidan muCalcutta, iine Victoria Memorial kumashure
Pakati pezvimwe zvinhu, muMaidan Park iwe unowana izvo zvakakurumbira Edheni Gardens Cricket Ground uye mujaho weCalcutta.
Asi pamusoro pezvose, kune kumucheto kwepaki kunomira chivakwa chinoshamisa che Chirangaridzo cheVictoria, chiyeuchidzo chekuyeuchidza mukuremekedza Mambokadzi Victoria mushure mekufa kwake muna 1901. Mukati mayo mune dzimba yemuseum iyo mifananidzo yemafuta pahupenyu hwamambokadzi inoratidzwa.
Imwe inofanirwa-kuona muCalcutta pasina mubvunzo itembere ye Belur Math. Haisi chero tembere, asi yakakosha kwazvo, nekuti ndiyo moyo weRamakrishna Movement. Chinhu chinonyanya kushamisa pamusoro pekuvakwa kwayo ndeye kusanzwisisika kwayo kusanganisa kweChristian, Islamic, Hindu uye Buddhist art. Uye ndeyekuti vavaki vayo vaida kuti iyi tembere mucherechedzo wekubatana kwezvitendero zvese.
Iyo yakasarudzika tembere yeBelur Math
Kumwe kushanya kwakakosha muCalcutta
Nzvimbo dzinonakidza dzekuona nekuwana muKolkata hadziperi. Zvirinani kutora zviri nyore uye kupira zuva rega rega rekugara kwako kuti utarise imwe nzvimbo yeguta. Zano rakanaka, semuenzaniso, ndere kutsvaga nzira dzeBritish dzekoloni, dzatichawana mukati Fort william, in the Cathedral yeSan Pablo uye mune neo-gothic chivakwa che Dare repamusoro.
Kuti unyatsozvinyudza mune yakasimba uye yakajeka mamiriro eguta, iwe unofanirwa kushanyira iyo musika wemaruva kuMullick Ghat uye haggle kumachira uye ematafura ematafura e Musika Mutsva. Izvo zvakare zvakakodzera kudonha ne Phears Lane mu Old Chinatown (iyo yekare Chinatown). Nekudaro, kuti unakirwe neruzivo rwegastronomic zana muzana muzana yechiBangali, zvinofanirwa kumira pane imwe yetsika maresitorendi mu Park Street.
Kushanya kwakasununguka kunopihwa neiyo Calcutta Botanical Bindu, uko maruva mahombe anokura uye matinozowana banyan muti mazana emakore akura. Ikoko iwe pakupedzisira uchawana runyararo rudiki pakati peakawanda manzwiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Kolkata, pakati pemaguta akanaka kwazvo muIndia
Makungwa makuru muAmerica